Orieslọ ọrụ na ebe obibi - Guangzhou Airwoods Environment Technology Co., Ltd.
Lọ ọrụ na-arụpụta ihe na-enwekarị ọchịchọ siri ike maka ikuku ikuku dịka ha bụ ndị na-eri ike dị ukwuu n’ọhịa dị iche iche. N'ihe karịrị afọ 10 nke ahụmịhe egosipụtara na azụmaahịa / ụlọ ọrụ mmepụta ihe HVAC na ntinye, Airwoods maara nke ọma na njikwa njikwa ihu igwe dị mkpa nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe. N'ihe kachasị mma usoro nhazi, nchịkọta data ziri ezi, nhọrọ akụrụngwa na nkesa nkesa ikuku, Airwoods na-ahazi. oru oma na ike ịzọpụta ihe ngwọta maka ndị ahịa, na-achọpụta mmepụta ma na-ebelata ụgwọ maka azụmahịa n'ichepụta ihe na-ezute ndị ahịa anyị kachasị mkpa.
Ihe HVAC choro maka ulo ahia na ihe omuma
Thelọ ọrụ / ụlọ ọrụ mmepụta ihe na-anọchite anya ọtụtụ kpo oku na mkpa jụrụ oyi, yana ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere nke ha chọrọ pụrụ iche. Orieslọ ọrụ na-arụ ọrụ na 24-hour arụpụtaghị okirikiri chọrọ ihe Wezuga siri ike HVAC usoro nke nwere ike ịnọgide na-enwe mgbe nile, pụrụ ịdabere na ihu igwe akara na dịtụ ala mmezi. Mmepụta nke ngwaahịa ụfọdụ nwere ike ịchọ njigide ihu igwe siri ike na nnukwu oghere na-enweghị obere mgbanwe na ọnọdụ okpomọkụ, ma ọ bụ ọnọdụ okpomọkụ dị iche na / ma ọ bụ ọkwa iru mmiri n'akụkụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
Mgbe ngwaahịa a na-arụpụta na-eweta kemịkalụ ikuku na ihe ndị dị na ya, ikuku ikuku na nzacha kwesịrị ekwesị maka nchedo ahụike na ngwaahịa ndị ọrụ. Nrụpụta nke elektrọnik ma ọ bụ kọmputa nwere ike ịchọ ọnọdụ nhicha.
Automobile n'ichepụta ogbako
Ihe omuma ulo oru elektrọnik
Nkuzi nhazi nri
Chip ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Anyị na-emepụta ma wulite ezigbo arụmọrụ, arụmọrụ arụmọrụ, na-agbanwe agbanwe omenala HVAC maka ụdị dị iche iche nke ngwa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, gụnyere nrụpụta dị arọ, ọrụ nri na ihe ọverageụverageụ, nrụpụta ọgbara ọhụrụ, na imepụta ọgwụ chọrọ ebe dị ọcha.
Anyị na-abịakwute ọrụ ọ bụla dịka okwu pụrụ iche, nke ọ bụla nwere nsogbu nke ya iji dozie. Anyị na-eme nyocha zuru oke nke mkpa ndị ahịa anyị, gụnyere nha ụlọ ọrụ, nhazi ihe owuwu, oghere arụ ọrụ, ụkpụrụ ikuku dị mma yana mkpa nke mmefu ego. Ndị injinia anyị na-echepụta usoro dabara na ihe ndị a chọrọ, ma ọ bụ site na nkwalite ihe n'ime usoro dị ugbu a, ma ọ bụ iwu ma wụnye sistemụ ọhụụ. Anyị nwekwara ike ịnye usoro nlekota nke ọma iji nyere gị aka ịhazi mpaghara ụfọdụ n'oge ụfọdụ, yana ọtụtụ ọrụ na atụmatụ mmezi iji mee ka usoro gị na-arụ ọrụ kacha mma maka afọ ndị na-abịa.
Maka imepụta ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, nrụpụta na arụmọrụ bụ igodo iji nwee ihe ịga nke ọma, yana usoro HVAC na-adịghị mma ma ọ bụ na-ezughị ezu nwere ike inwe mmetụta dị oke njọ na ha abụọ. Ọ bụ ya mere Airwoods siri iji nye ndị ahịa anyị ụlọ ọrụ na-adịgide adịgide, ntụkwasị obi na nke ọma, yana ihe kpatara ndị ahịa anyị ji adabere na anyị ka anyị nweta ọrụ ahụ oge mbụ.
Netherlands agba ụlọ HVAC System
Automtù Beijing Automotive Group AHU
Ogbe ndi ozo nke Mooncake
Vinyl Record Factory HVAC usoro
Fiji Printing Osisi HVAC Design
Rotary Okpomọkụ Exchanger maka Samsung Factory